4 in 1 Vibrotor – MM Online Shopping
4 in 1 Vibrotor
Categories: Uncategorised, Sex Toys, Vibrator
မိုက်ကရိုဖုန်းပုံစံ ထိပ်ခေါင်းလေးသည် မိန်းမအင်္ဂါနှင့် မအင်္ဂါအစေ့(clitoris) ကို နှိပ်နယ်ပေးတယ်
အထွှတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ ခက်ခဲသော အမျိုးသမီးများအတွက် ခံစားမူ ပိုကောင်းစေပါတယ်
မိမိဘာသာ တကိုယ်ရေ အာသာ ဖြေရာတွင်ဖြစ်စေ ၊ စုံတွဲလိုက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
နောက်ထပ် ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်း၃မျိုးလုံးက clitoris stimulation ကို လှုံဆော်ပေးရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော ဗိုင်ဗရေတာဖြစ်ပါတယ် .မျက်နှာပြင် ၁ခုလုံးကိုရောက်စေရန်အတွက် မတူညီတဲ့ ခေါင်း ၃ခုလုံးထည့်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် .
Clitoris ပုံလေးပါထည့်ထားပေးပါတယ် vulva ဆိုတာက မအင်္ဂါတခုလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် .
လှုံဆော်ပေးတဲ့ ထိပ်ခေါင်းလေးတွေ့ကိုတော့ ဆီလီကွန်နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး အောက်က ကိုင်ဆောင်ရတဲ့ ပစည်းကိုတော့ကော်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်
ဓာတ်ခဲ ၁လုံးပါပါတယ် ကုန်သွားရင် ဓာတ်ခဲ နမူနာပြပြီးဆိုင်တွင်မေးဝယ်လို့ရပါတယ် .
ပစ္စည်းရဲ့ အားသာချက်က ဈေးနူန်းချိုသာပြီး ခေါင်း ၄မျိုးပါသဖြင့် အသုံးပြုရတာ တန်ပါတယ် ..
အားနည်းချက်က တုန်ခါမူ အရမ်းမပြင်းပါ ၃၀၀၀၀ တန် ဗိုင်ဗရေတာတွေ့နဲ့ယှဉ်ရင်
ခပ်ပြင်းပြင်းကြိုက်သူများ မရွှေးချယ်သင့်ပါ အခုမှာ အမျိုးသမီးကို ဗိုင်ဗရေတာနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်မယ်လူတွေ့အတွက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်. ..
မိုကျကရိုဖုနျးပုံစံ ထိပျခေါငျးလေးသညျ မိနျးမအင်ျဂါနှငျ့ မအင်ျဂါအစေ့(clitoris) ကို နှိပျနယျပေးတယျ
အထှတျအထိပျရောကျဖို့ ခကျခဲသော အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ခံစားမူ ပိုကောငျးစပေါတယျ
မိမိဘာသာ တကိုယျရေ အာသာ ဖွရောတှငျဖွဈစေ ၊ စုံတှဲလိုကျဖွဈစေ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ.
နောကျထပျ ပါဝငျတဲ့ ပစ်စညျး၃မြိုးလုံးက clitoris stimulation ကို လှုံဆျောပေးရနျအတှကျ ထုတျလုပျထားသော ဗိုငျဗရတောဖွဈပါတယျ .မကျြနှာပွငျ ၁ခုလုံးကိုရောကျစရေနျအတှကျ မတူညီတဲ့ ခေါငျး ၃ခုလုံးထညျ့ထားပေးခွငျးဖွဈပါတယျ .
Clitoris ပုံလေးပါထညျ့ထားပေးပါတယျ vulva ဆိုတာက မအင်ျဂါတခုလုံးကိုဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ .
လှုံဆျောပေးတဲ့ ထိပျခေါငျးလေးတှကေို့တော့ ဆီလီကှနျနဲ့ပွုလုပျထားပွီး အောကျက ကိုငျဆောငျရတဲ့ ပစညျးကိုတော့ကျောဖွငျ့ ပွုလုပျထားပါတယျ
ဓာတျခဲ ၁လုံးပါပါတယျ ကုနျသှားရငျ ဓာတျခဲ နမူနာပွပွီးဆိုငျတှငျမေးဝယျလို့ရပါတယျ .
ပစ်စညျးရဲ့ အားသာခကျြက စြေးနူနျးခြိုသာပွီး ခေါငျး ၄မြိုးပါသဖွငျ့ အသုံးပွုရတာ တနျပါတယျ ..
အားနညျးခကျြက တုနျခါမူ အရမျးမပွငျးပါ ၃၀၀၀၀ တနျ ဗိုငျဗရတောတှနေဲ့ယှဉျရငျ
ခပျပွငျးပွငျးကွိုကျသူမြား မရှေးခယျြသငျ့ပါ အခုမှာ အမြိုးသမီးကို ဗိုငျဗရတောနဲ့ စတငျမိတျဆကျမယျလူတှအေ့တှကျဆိုရငျတော့ အဆငျပွပေါတယျ. ..
Be the first to review “4 in 1 Vibrotor” Cancel reply